အင်တာနက်ပေါ်မှအကောင်းဆုံး Logo ရင်းမြစ်များ
လိုဂိုဒီဇိုင်းအရင်းအမြစ်များ - အကြံဥာဏ်၊ ဒေါင်းလုပ်ချခြင်း၊ သတင်းစာ၊ အလေ့အကျင့်ကောင်းများ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, နိုဝင်ဘာလ 4, 2020 ကြာသပတေးနေ့, မတ်လ 11, 2021 Douglas Karr
လိုဂို၏တန်ဖိုးကဘာလဲ။ Nike လိုကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမေးကြည့်ပါ။ သင်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အမှန်တရားကတော့ ၁၉၇၁ ခုနှစ်မှာ Nike ကဒေါ်လာ ၃၅ ပေးရတယ် သူတို့ရဲ့လိုဂိုသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လိုဂိုဒီဇိုင်းအတွက်နှုန်းထားသည်ဒေါ်လာ ၁၅၀ မှ ၅၀,၀၀၀ ကြားရှိနိုင်သည်။ မကြာသေးမီက၎င်းတို့သည်သူတို့၏စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဂူဂဲလ်ပုံရှာဖွေမှုလုပ်သည့်အခါရှာဖွေရန်သာအမှတ်တံဆိပ်ဒီဇိုင်းတွင်ဒေါ်လာ ၁၆၀၀၀ သုံးစွဲသောဖောက်သည်တစ် ဦး နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကုမ္ပဏီမှဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ပြီးဒေါ်လာ ၂၅၀ ဖြင့်အွန်လိုင်းဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမူရင်းထူးခြားသည်။ သူတို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဒီဇိုင်းလိုဂို။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်လမ်းညွှန်နှင့်အတူလိုက်ပါလိုသောတံဆိပ်တို့၏တန်ဖိုးကိုကျွန်ုပ်တို့လုံးဝမြင်တွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သိသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်သောကုမ္ပဏီများသည်ရလဒ်များကိုလုံးဝမြင်တွေ့ခဲ့ရသည် တစ်ခါတစ်ရံသင်က၎င်းကိုမတတ်နိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်လိုဂိုလိုလိုလျှင်ရိုးသားမှုအားလုံးတွင်အံ့သြစရာကောင်းသည့်အရင်းအမြစ်များရှိသည်။
ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောအမှတ်အသားဒီဇိုင်းအရင်းအမြစ် ၅၀ ကျော်၊ မှုတ်သွင်းခံမှဆုများ၊ ပြိုင်ပွဲများနှင့်လူစုလူဝေးများအထိ၊ ဘလော့ဂ်များနှင့်သမိုင်း ၀ က်ဘ်ဆိုက်များအထိဖြစ်သည်။ ပျော်
Adobe Illustrator တွင်လိုဂိုတစ်ခု ဖန်တီး၍ ဒီဇိုင်းဆွဲသူ၏ဤဗွီဒီယိုကိုနှစ်သက်ပါ။
ပြီးပြည့်စုံသောလိုဂိုတစ်ခုဖန်တီးရန်မည်သည့်အရာကလိုအပ်သည်ကိုရှာဖွေပါ၊ ကိုယ့်ကို Creative, ပေါင်းလိုဂိုဒီဇိုင်း infographic! ချစ်တယ်
Logotypers များ - ပုံကြမ်းတစ်ခုကိုတင်ပါ (သင်၏ဖုန်းဖြင့်ပုံ၊ PowerPoint ဖိုင်တစ်ခုသို့မဟုတ်သုတ်ပုံဆွဲပါ) ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့သည်နာရီအတွင်းကြီးစွာသောလိုဂိုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲမည်။
DesignEvo သည်ထူးခြား။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အမှတ်တံဆိပ်များကိုအခမဲ့ဖန်တီးရန်ကူညီသောအွန်လိုင်းလိုဂိုထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ သူတို့ကတဆင့်ရှာဖွေရန်ရရှိနိုင်သည့်အိုင်ကွန်တစ်သန်းကျော်၊ ရာပေါင်းများစွာသောစာသားဖောင့်များနှင့်ရွေးချယ်စရာများနှင့်သင့်လိုဂိုကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်အားကောင်းသည့်တည်းဖြတ်ကိရိယာတစ်ခုပေးသည်။
သင်၏ Logo ကိုစတင်တည်ဆောက်ပါ
Crowdsourced Logo ဒီဇိုင်းအရင်းအမြစ်များ -
Crowdsourced site များရှိအမှတ်တံဆိပ်များကိုပေးပို့နိုင်သောဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းနာများဖြန့်ဖြူးသောကွန်ရက်များရှိသည်။ ဆုရှင်ကငွေကိုချီးမြှင့်သည်။ (မင်းအတွက်ကြီးတယ်။ ဒီဇိုင်နာတွေအတွက်အမြဲတမ်းတော့မကောင်းဘူး!)
လူစု - $ 200 မှ crowdsourced ။
ဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲ - ဒေါ်လာ ၁၀၀ မှသင်၏ပြိုင်ပွဲကိုစတင်ပါ။
DesignCrowd - လိုဂိုဒီဇိုင်းလိုအပ်ပါသလား။ သင်၏ဒီဇိုင်းများကိုယခုအွန်လိုင်းတွင်ရှာဖွေပါ။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ပွိုင့် - ဤဖိုရမ်များတွင်သင်၏စျေးနှုန်းနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုတင်ပါ။
eYeka - သင်၏ကိုယ်ပိုင်စျေးနှုန်း (အဆင့်မြင့်စျေးနှုန်းနှင့်ဆုများ) ကိုသင်အမည်ပေးသည့်လူစုလူဝေးပြိုင်ပွဲများ။
48 နာရီ - ဒေါ်လာ ၈၉ ဒေါ်လာဖြင့်ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည်
ဂရပ်ဖစ်ပြိုင်ပွဲများ - ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ မှပြိုင်ဆိုင်မှု
မင်းချစ်သူ - တံဆိပ်ဒီဇိုင်းများနှင့်တင်းပလိတ်များ
Hatchwise ပါ - $ 100 မှပြိုင်ပွဲ
လွိုင်ကော် - ဒေါ်လာ ၂၀၀ မှပြိုင်ပွဲများ။
လိုဂိုပြိုင်ပွဲ - ဒေါ်လာ ၂၇၅ မှ ၅၀-၂၀၀ + စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းများကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်သင်အမှန်တကယ်လိုချင်သည့်အမှတ်တံဆိပ်ကိုရယူပါ။
99designs - ဒေါ်လာ ၂၁၁ မှလူစုလူဝေးဒီဇိုင်းများ
မင်္ဂလာပါ - $ 149 ကနေ crowdsourced
.ရာဝတီ - သင်၏ဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပပါ
ZenLayout - ပြိုင်ပွဲ $ 250 မှစတင်
စျေးနှုန်းချိုသာသော Logo ဒီဇိုင်း - $ 45 မှ packages များ။
BusinessLogo.net - $ 99 မှ packages များ။
BXC - ကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိပ်၊
ကုမ္ပဏီ Folders - အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းဝန်ဆောင်မှုကိုတစ်နာရီလျှင် ၇၅ ဒေါ်လာဖြင့်စတင်သည်
Infinity လိုဂိုဒီဇိုင်း - ဒေါ်လာ ၁၂၅ မှဒီဇိုင်းများ
မှင် - $ 99 မှပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်းအထုပ်များ
နေပြည်တော် - ဒေါ်လာ ၁၂၅ မှဒီဇိုင်းများ
Logo စက်ရုံ - ဒေါ်လာ ၃၉၅ မှလိုဂိုဒီဇိုင်းများ
လိုဂိုဒီဇိုင်းအဖွဲ့ - $ 149 မှ packages များ
Logo အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီဇိုင်းအေဂျင်စီ - ကိုးကားများအတွက်ဆက်သွယ်ပါ
အဆိုပါ Logo Loft - $ 99 မှ packages များ။
LogoMagic.com - $ 269 မှစတင်သော package များ။
LogoNerds.com - $ 27 မှစတင်သော packages များ။
မင်္ဂလာပါ - $ 250 မှစတင်သော packages များ။
လိုဂိုလက်ရာများ - HP မှဒီဇိုင်းသည်ဒေါ်လာ ၂၉၉ ဖြစ်သည်။
NetMen - ဒီဇိုင်းကိုဒေါ်လာ ၁၄၉ မှစတင်သည်။
Vistaprint - ၎င်းတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအခမဲ့အသုံးပြုရန်အတွက်ကြိုတင်ပြုလုပ်ထားသောနှင့်အလိုအလျောက်အမှတ်တံဆိပ်များ။
ဘလော့ဂ် - ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အတိုင်ပင်ခံ Jeff Fisher မှဖြစ်သည်
ကွမ်းခြံကုန်း - Envato မှ site တစ်ခု
နာမည်ကြီးလိုဂိုများ - အမှတ်တံဆိပ်ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအကောင်းဆုံးသတင်း၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုယူဆောင်လာရန်ရည်ရွယ်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်။
Logobird Logobird သည်လန်ဒန်အခြေစိုက်ဒီဇိုင်းဘလော့ဂ်နှင့်စတူဒီယိုဖြစ်သည်။
အဆိုပါလိုဂိုကုမ္ပဏီ - စိတ်ကြိုက်အမှတ်တံဆိပ်ဒီဇိုင်းများ…အသစ်သောအမြင့်သို့ဒီဇိုင်းများကိုယူသည်။
လိုဂို Bliss - လိုဂိုဒီဇိုင်းလှုံ့ဆော်မှုနှင့်ပြခန်းဆိုဒ်။
မင်္ဂလာပါ - Logopond သည် ၀ က်ဘ်ပတ်ပတ်လည်မှမည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုဖော်ပြသည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်နှင့်ကမ္ဘာ့ဒေသအားလုံးမှ Logo အနုပညာရှင်သည်ဤ site ကိုမကြာခဏပြုလုပ်သည်။
လိုဂိုဘလော့ဂ် - Logo Blog သည် ၀ က်ဘ်၏လိုဂိုဒီဇိုင်းအတွက်အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
လိုဂိုဒီဇိုင်းဘလော့ဂ် - Logo Designer Blog သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ လိုဂိုနှင့်ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာဒီဇိုင်းအပေါ်တွင်သာအာရုံစိုက်ထားသောဘလော့ဂ်ဖြစ်သည်။
အိပ်မက်ဆုများမှအမှတ်တံဆိပ် - လစဉ်တင်ပြချက်များနှင့်လစဉ်ရရှိသောဘလော့ဂ်။
Logolog Logolog သည် logo ဒီဇိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဘလော့ဂ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါ - အမှတ်တံဆိပ်ဆိုင်ရာသတင်းနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။
မီဒီယာ Bistro - နှစ်ပတ်လည်လိုဂိုဆုဆိုဒ်။
၎င်းသည်ထူးခြား။ အမှတ်ရစရာနှစ်မျိုးလုံး၏စိတ်ကူးကောင်းသောဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည် (ကျွန်ုပ်အမြင်) ။ အဆိုပါအနုပညာရှင်တော်တော်များများလုပ်ခဲ့တယ်:
သူကdနှင့် k နှစ်ခုလုံးကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။
ငါသူ့ကိုဒီဇိုင်းပြန်လုပ်ဖို့တကယ်တောင်းဆိုတာမျိုးမရှိပေမဲ့ကျွန်မရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ကိုကိုယ်စားပြုပုံကိုချက်ချင်းသဘောကျမိတယ်။ နောက်တစ်နေ့ငါကဒ်များ၊ ငါ၏ဆိုင်းဘုတ်များနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဒီဇိုင်းပြန်ရေးဆွဲနေသည်။
သင့်ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းအတွက် Vector Logo ဖိုင်များကိုဝယ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏စပွန်ဆာများကိုကျွန်ုပ်တို့ချစ်ကြသည် Depositphotos ပြီးတော့၎င်းတို့အတွက်သင် vector files များ ၀ ယ်ယူနိုင်သောလိုဂိုများစွာရှိသည်။ သင်လိုအပ်သည့်အရာနှင့်နီးသောအရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ပါ။ ၎င်းကိုဝယ်ယူပါ၊ ၎င်းကိုသင့်ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်စေရန်၎င်းကိုဝယ်ယူပါ။
အခုဆိုရင် Vectors များအတွက်စျေးဝယ်!
ထုတ်ဖော်: ဤ post ကိုတလျှောက်လုံးကျနော်တို့ Affiliate လင့်ခ်အသုံးပြုနေသည်။
Tags: အံ့သြဖွယ်လိုဂိုဒီဇိုင်းများအကောင်းဆုံးလိုဂိုဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီအကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းလိုဂိုဒီဇိုင်းအကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းလိုဂိုဒီဇိုင်းဝန်ဆောင်မှုလိုဂိုကိုဝယ်ပါလိုဂိုကိုဝယ်ပါအွန်လိုင်းစျေးပေါလိုဂိုဒီဇိုင်းအွန်လိုင်းစျေးပေါလိုဂိုလူအစုအဝေးအရင်းအမြစ်လိုဂိုဒီဇိုင်းလူစုcrowdsource လိုဂိုဒီဇိုင်းcrowdsourced လိုဂိုcrowdsourced လိုဂိုဒီဇိုင်းcrowdsourcing လိုဂိုဒီဇိုင်းcrowdsourcing အမှတ်တံဆိပ်သောင်းကျန်းသူတစ် ဦး လိုဂိုဒီဇိုင်းဒီဇိုင်းလိုဂိုမင်္ဂလာပါဒီဇင်ဘာအင်တာနက်လိုဂိုဒီဇိုင်းဖန်တီးမှုပဲလိုဂိုဆိုဒ်များစာရင်းလိုဂိုအမှတ်တံဆိပ်လိုဂိုဘလော့ဂ်လိုဂိုဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းလိုဂိုဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲလိုဂိုလိုဂိုလှုံ့ဆော်မှုလိုဂိုဆိုဒ်များလိုဂိုစစ်တမ်းလိုဂိုမင်္ဂလာပါလွိုင်ကော်မြို့လိုဂိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလိုဂိုစိတ်ကူးများမီဒီယာဘစ်စထရိုလိုဂိုဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
ဇွန် 6, 2010 မှာ 10: 40 pm တွင်
Douglas – မင်းရဲ့စာရင်းထဲမှာ ငါတို့ကို ပါဝင်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
FYI ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲများသို့ တင်သွင်းရန် သတ်မှတ်ထားသော ဒီဇိုင်နာများကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး ငွေပေးချေနိုင်သည့် 'hybrid crowdsourcing' ၏ တရားမျှတသော ပုံစံသစ်ကို စတင်လိုက်ပြီဖြစ်သည် - ယနေ့မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို ကြည့်ပါ- http://prwire.com.au/permalink/18300/design-contest-website-launches-hybrid-crowdsourcing-model-with-15-000-designers-2
အဓိကအချက်မှာ ဒီဇိုင်နာများသည် ၎င်းတို့၏ ဒီဇိုင်းကို ရွေးချယ်မည်ဆိုပါက အာမခံချက်ရှိသော ငွေပေးချေမှုကို ဆိုလိုပါသည်။ Crowdsourcing သည် အောင်နိုင်သူဖြစ်ရန် မလိုအပ်ပါ သို့မဟုတ် "ဒီဇိုင်နာများအတွက် မသင့်တော်ပါ" ဟု သင်ထားသကဲ့သို့ပင်။ အကယ်၍ သင်သည် ကိုယ်တိုင်အင်တာဗျူးလုပ်ရန် သို့မဟုတ် DesignCrowd မှတဆင့် case study project တစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ရန် စိတ်ဝင်စားပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။ http://twitter.com/designcrowd ????
ထို့အပြင် ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်ရှိ လိုဂိုဒီဇိုင်း အရင်းအမြစ်အချို့လည်း ရှိပါသည်။
ဇွန်လ7ရက် 2010 ခုနှစ် နံနက်9နာရီ 28 မိနစ်
Google "လိုဂိုဒီဇိုင်း" တွင် သင်၏စွမ်းရည်ကို ချီးကျူးနေချိန်တွင်၊ ဈေးပေါသော လိုဂိုဒီဇိုင်း၏ ကြီးထွားလာမှုနှင့် ဂုဏ်ပြုပွဲတစ်ခုလုံးသည် စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းနေပါသည်။ သင်ကမ်းလှမ်းထားသော ဆိုက်များသည် ဗျူဟာမြောက် တွေးခေါ်မှု မရှိဘဲ ပြောင်မြောက်သော ရုပ်ပုံများ (“မင်းနာမည် ဤနေရာ” ကဲ့သို့) ရိုးရှင်းစွာ ပေးဆောင်သည်။
သင် "မူရင်း" လိုဂိုရရန် သေချာစေရန် အကြံပြုချက်များကို ပို့စ်တင်နေစဉ် လူစုလူဝေး စုဆောင်းခြင်း လိုဂိုဆိုက်များကို တွန်းပို့ခြင်းသည် - အနည်းငယ်ပေါ့ဆမှုမရှိပါက ရယ်စရာကောင်းပါသည်။
အချက်တစ်ချက်တွင် သင်သည် မှန်ကန်သည်- သင် ပေးချေသောအရာကို သင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ သင်၏စာဖတ်သူများအတွက် ကျွန်ုပ်၏မျှော်လင့်ချက်မှာ ဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ၎င်းတို့၏ လိုဂိုကို ဆုချီးမြှင့်ခြင်းမပြုမီ အနည်းငယ်ပို၍ လုံ့လစိုက်ထုတ်ကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဇွန်လ7ရက် 2010 ခုနှစ် နံနက် 11 နာရီ 07 မိနစ်
တုံ့ပြန်ချက်ကို တန်ဖိုးထားပါ (တကယ်လုပ်ပါ)၊ တံဆိပ်တပ်ခြင်းအေဂျင်စီများသည် ၎င်းတို့၏တန်ဖိုးကို သက်သေပြရန် အပေးအယူခံရသည့်အနေအထားတွင် ရှိနေသည်ကို ကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်။ Kristian Andersen ကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီများသည် သင့်တန်ဖိုးကို သံသယမရှိပါ - အချို့သော ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ အမှတ်တံဆိပ်ကို အသိအမှတ်ပြုရန် အကြွေးတင်နေပါသည်။
လိုဂိုဒီဇိုင်းသည် အတိုက်အခိုက်ခံနေရသည် - ဤအချိန်တွင် အခြားဝဘ်အခြေခံကုမ္ပဏီနှင့် မတူပါ။ “အခမဲ့!” ဟုအော်သော Chris Anderson ကဲ့သို့သော လူများရှိသည်။ Video hosting sites များသည် YouTube နှင့် မယှဉ်နိုင်ပါ၊ Analytics ကုမ္ပဏီများသည် Google နှင့် ရုန်းကန်နေရပြီး WordPress နှင့် Squarespace ကဲ့သို့သော CMS စနစ်များကို ယှဉ်ပြိုင်နေပါသည်။
ကျွန်တော် ရပ်တည်ပြီး “No Spec” ကို ငြင်းခုံနိုင်သော်လည်း ဤဝန်ဆောင်မှုအချို့ကို ကျွန်ုပ် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ အသုံးပြုခဲ့ပြီး ၎င်းတို့နှင့် အလွန်ကောင်းမွန်သော ရလဒ်များကို ရရှိခဲ့သည်။ သူတို့ကို မကြိုက်ရင် သူတို့ ကျော်ကြားလာတာကို ဖုံးကွယ်ထားစရာ မရှိပါဘူး။ ငွေသားထုပ်ပိုးပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအတွက် မတတ်နိုင်သော ကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက်၊ စျေးပေါပြီး ပြောင်မြောက်သော လိုဂိုကို အဘယ်ကြောင့် မသွားသင့်သနည်း။ တခြားဘာမှ မလုပ်ဘဲနဲ့ လုပ်ကြလိမ့်မယ်။
ဤဝန်ဆောင်မှုအချို့/များစွာကို သင်ဘာကြောင့် ရှောင်ရှားရကြောင်းကို ပို့စ်တစ်ခုတင်စေလိုပါသည်။
ဇွန် 9, 2010 မှာ 1: 38 pm တွင်
AOL အမှုဆောင်ဟောင်း Mark Walsh မှ ဦးဆောင်ပြီး Peter LaMotte မှ ဦးဆောင်သော GeniusRocket (www.geniusrocket.com) သည် လိုဂိုများနှင့် အခြားဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ လူစုလူဝေးရှာဖွေနိုင်သည့် စွမ်းရည်များရှိသည်။
2:2010 pm မှာနိုဝင်ဘာ 4, 25
ကျွန်ုပ်တို့သည် လိုဂိုဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲ ဆိုက်အသစ်ကို ယခုမှ စတင်လိုက်သည်- http://www.logoarena.com
10:2011 pm မှာအောက်တိုဘာ 6, 10
၎င်းသည် လိမ်လည်မှုဖြစ်သောကြောင့် သင့်စာရင်းမှ marvellogodesign ကို ဖယ်ရှားပါ။ http://pondpad.com/forum/viewtopic.php?id=3856 နှင့်http://www.wordpressblue.com/2009/08/marvel-logo-designs/ ကိုကြည့်ပါ။
10:2011 pm မှာအောက်တိုဘာ 8, 16
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ မိုက်ကယ်။ ငါသူတို့ကိုစာရင်းမှဖယ်ရှားပြီး Creattica ကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။
နိုဝင်ဘာလ 30 ရက် 2011 ခုနှစ် ညနေ 3:43 နာရီ
Marvel Design လိုဂိုဒီဇိုင်းများကို သတိပြုပါ။ ဝေးဝေးမှာနေကြပါလို့ အကြောင်းပြန်ဖို့ အသက်ကြီးလာပါပြီ။ အလွန်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိ။
3:2012 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 54
ဧပြီ 16, 2013 မှာ 7: 46 pm တွင်
ကျွန်တော် မကြာသေးမီက လိုဂိုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ http://www.logotypers.com သူတို့သည် ကျွန်ုပ်၏ပုံကြမ်းကိုယူ၍ 10 ဒေါ်လာသာရှိသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လိုဂိုတစ်ခုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည် (သို့သော် သင်သည် ပုံကြမ်းတစ်ခု သို့မဟုတ် ppt သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ကို လမ်းညွှန်ရန်တစ်ခုခုကို အပ်လုဒ်လုပ်ရန် လိုအပ်သည်)
ဧပြီ 16, 2013 မှာ 8: 19 pm တွင်
စိတ်ကူးကောင်းလိုက်တာ။ ကျွန်ုပ်သည် Logotypepers ကို ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကဏ္ဍတွင် ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
မေလ 21, 2013 မှာ 6: 04 AM
လိုဂိုဒီဇိုင်းမျှဝေခြင်း၏အရင်းအမြစ်အားလုံးသည် ဖန်တီးမှုတင်ဆက်မှုနှင့်အတူ အသုံးဝင်ပြီး ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသော ဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ သင့်အတွက် မျှဝေထားသော အရာကောင်းများ။ ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ မျှဝေပေးလို့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
မေလ 13, 2015 မှာ 3: 26 pm တွင်
ငါဒီစာရင်းကိုချစ်တယ်။ လူများနှင့် လင့်ခ်များ အတွက် ရွေးချယ်စရာ မျိုးစုံကို သင် ပေးဆောင်နေသည် ဟူသော အချက်သည် ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်သည်... ၎င်းသည် စောင့်ရှောက်သူ ဖြစ်သည်။
မေလ 13, 2015 မှာ 8: 21 pm တွင်
17:2015 pm မှာအောက်တိုဘာ 1, 34
ဧပြီ 21, 2016 မှာ 8: 02 pm တွင်
မေလ 30, 2016 မှာ 3: 12 AM
မေလ 30, 2016 မှာ 3: 14 AM
ဇွန်လ 28 ရက် 2016 ခုနှစ် နံနက်9နာရီ 25 မိနစ်
လိုဂိုတစ်ခုသည် သင့်အမှတ်တံဆိပ်၏ မှန်သားပုံဖြစ်သည်။ လိုဂိုဖန်တီးခြင်း၏ ချက်ပြုတ်နည်းသည် အလွန်စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသည်။
ဟုတ်တယ်၊ Nike ရဲ့ လိုဂိုဟာ အစမှာ $35 ကုန်ကျခဲ့ပေမယ့် အခု ဒေါ်လာ 600,000 ကျော် တန်ကြေးရှိပါတယ်။ လိုဂိုကောင်းကောင်း ဒီဇိုင်းထုတ်ရုံနဲ့ သင့်လုပ်ငန်းကို မြှင့်တင်ဖို့ ဘယ်တော့မှ မကူညီနိုင်ပါဘူး။ သင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ထုတ်ကုန်များသည် သင့်လိုဂို၏ ခိုင်မာမှုကိုလည်း ဖော်ညွှန်းရမည်ဖြစ်သည်။
4:2017 pm မှာအောက်တိုဘာ 6, 02
ကျွန်ုပ်သည် ထူးခြားသောလိုဂိုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်အတွက် Logo Design သဘောတရားများကို ရှာဖွေနေပြီး သင့်ပို့စ်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒီပို့စ်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ပရောဂျက်အသစ်တွင် အသုံးချရန် အကြံကောင်းအချို့ရှိသည်။
သြဂုတ် 29, 2018 မှာ 1: 30 AM
မင်းရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ အကြံပြုချက်တွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ 20, 2019 မှာ 9: 16 AM
လိုဂိုဒီဇိုင်းအကြောင်း ကောင်းတဲ့ ပို့စ်လေးပါ။ ပို့စ်အသစ်အတွက် စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေ အများကြီးရခဲ့တာ သေချာပါတယ်။ ဒီ Doug အတွက် တစ်တန် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ပျော်ရွှင်စရာ ခရစ်စမတ်ပါ။
ဇန်နဝါရီလ7ရက် 2020 ခုနှစ် ညနေ4နာရီ 08 မိနစ်
ကောင်းမွန်တဲ့ မှတ်ချက်ပေးမှုအတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ဆယ်လီ။ မင်း မယုံနိုင်လောက်စရာ အားလပ်ရက်ဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
မေလ 16, 2021 မှာ 12: 19 pm တွင်
ဇွန်လ 29 ရက် 2021 ခုနှစ် နံနက်9နာရီ 49 မိနစ်
Inspire လုပ်ဖို့အာမခံထားတဲ့ Logo Design အရင်းအမြစ်အချို့